WarbixinFaarax Macalinoow Nin Ku dilay Har kuuma Jiido. | Barbaariyaha bulshada
Jul 6, 2018 - jawaab
Faarax Macalinoow Nin Ku dilay Har kuuma Jiido.
Sida muuqata Madaxweyne Farmaajo ayaa wada tallaabo uu afka ku qabanayo halyeygii Soomaaliyeed Qalbi-dhagax ee ogaalkiisa loogu gacangeliyay Itoobiya oo aynu ognahay waxa inaga dhaxeeya.
Arrinkaas waxaa soo baxaya inuu Madaxweyne Farmaajo u wakiishay rag reer ahaan ay is xigaan Cabdikariin Qalbi-dhagax. Raggaas waxaa calan-wadayaal u ah labada nin ee kala ah Faarax Macallin oo ahaan jiray afhayeenkii hore ee baarlamaanka Kenya iyo wasiirka duulista ee Dawladda Federalka Somaliyeed Mudane Maxamed Cabdullaahi Oomar.
Faarax macallin ayaa la ogyahay inuu si toos ah iyo si dadbanba xoolo gunno ah uga qaato Md Farmaajo Si uu u noqdo afku-dable lagu halgaado cid walba oo dhaliil usoo jeedisa Md Farmaajo iyo maamulkiisa. Taas ayaana keentay inuu kaga hortago Cabdikariin gegida diyaaradaha ee Jomo Kenyata.
Mr Oomaar ayaa laggu soo waramayaa inuu sidii dawaco sumeysan wareegayayo suuqyada iyo dariiqyada Nairobi isagoo mar uun ka rajo qabay inuu indhaha saaro Cabdikariin Qalbi-dhagax. Waxaa la rumeysan yahay in oomaar xambaarsanaa fariin adag oo uu ka waday Md Farmaajo, isagoo qorshahiisu yahay inuu afka qabto Qalbi-dhagax isagoo kaashanaya Md. Faarax Macallin.
Dhinaca kale Cabdikariin Qalbi-dhagax ayaa ballan u qaaday ummadda Soomaaliyeed ee hiil iyo hoo la dhinac istaagtay markii la xiray inuu la wadaagi doono siday wax u dhaceen iyo weliba cid walba oo ku lug lahayd xadgudubkii loo geystay.
Mar haddii arrintu sidaa tahay soo maaha ”Nin ku dilay hadh kuuma jiido”
By Mohamed Hussein Ahmed